Obama oo Taageero u Raadinaya Heshiiska Iran
Madaxweyne Obama ayaa ugu baaqey dadka ka soo horjeeda heshiiska Iran in ay siyaasada ka doortaan dagaalka. Isagoo isku haleynaaya taageerada Congresska ee ee heshiiskan ayaa waxa uu hadal ka jeediyey Jaamacada Washington.
Wariyaha VOAda Ari Panda ayaa warbixintan ka soo dirty Aqalka Cad. Falastin Ahmed Iman ayaa noo soo koobeysa.
Hadaba Qudbadii Madaxweyne Obama uu shaley jeediyey waxa uu ku abaarey heshiiska ay beesha caalamka la gashey Iran isagoo xusey in wadada kaliya ee furan marka meel la iska dhigo dagaal kale oo ka qarxa bariga dhexe ay tahay Heshiis.
Abdiqafar Abdi wardhere oo ku taqasusey horumarinta Caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ayey Falastin Ahmed Iman weydiisey bal waxa uu hadalkiisan ka badali karo codka ay Congressku u qaadi doonaan heshiiskaas bartmaha bisha soo socota.
Dhageyso hadalka Obama